Heano maitiro ekuwana Windows 10 Sun Valley mifananidzo ikozvino isina kuve Insider
Muri pano: musha / System Admin / Windows / Heano maitiro ekuwana Windows 10 Sun Valley mifananidzo ikozvino isina kuve Insider
March 27, 2021 by Justin26
Microsoft iri kuronga yakanaka yekuona yekuvandudza ye Windows 10 muhafu yepiri yegore rino. Iyo inonzi "Sun Valley" yekuvandudza yatove mukuyedza nayo Windows 10 Vanopinda, uye tiye achangovaka yakaunzwa anoverengeka akagadzirwazve folda mifananidzo ichibva paFluent Dhizaini.
Kana iwe uchida izvi zvidhori izvozvi iwe unogona zvirokwazvo kuve Insider, asi izvo hazvinyatso kubvumirwa pamushini wako mukuru, uye zvaizoreva kugara uchiisirwa software yekuyedza.
Iko kune zvakadaro yakachengeteka uye yakapusa nzira yekuwana iwo ma icon pasina kumhanyisa beta OS. Ivo vanhu vakanaka paMSFTNext vaburitsa zvidhori kubva kuShell32 uye Imageres uye vakaita kuti zviwanikwe kurodha pasi, saka unogona ikozvino kurodha zvirinani zvidhori uye wozvishandisa kugadzirisa mafaira ako.
Kuchinja kutaridzika kwechiratidzo:
Dhawunirodha uye bvisa iyo icon yakaiswa.
Dzvanya-kurudyi pane ipfupi yaunoda kuchinja
Sarudza shanduko icon.
Bhurawuza kwawakaburitsa icon yakatarwa uye sarudza iyo icon yaungade kushandisa.
Haasi ese maapplication uye maforodha anogona kuve nemimwe mifananidzo, asi mapfupi anogona kuchinjwa zviri nyore.
Tsvaga zvidhori paMSFTNext pano.
20 Yemahara Ecommerce Icon Sets yeNavigation, Dhizaini
A Complete List Of Rundll32 Mirairo Windows 10